शेयर बजारमा आज पनि पहिरो : २५ अङ्कले घट्दै एक हजार आठ सय ४८ दशमलव २८ विन्दुमा सिमित ! – Online Kendra
शेयर बजारमा आज पनि पहिरो : २५ अङ्कले घट्दै एक हजार आठ सय ४८ दशमलव २८ विन्दुमा सिमित !
९ असार २०७९, बिहीबार १७:४१ NewsRoom
असार ९, काठमाण्डौ । शेयर बजार आज बिहीवार पनि उच्च अङ्कले घटेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज ४५ दशमलव २५ अङ्कले घटेर एक हजार आठ सय ४८ दशमलव २८ विन्दुमा झरेको छ । सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, जलविद्युत्, बीमा, उत्पादन र लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओरालो लागेको छ ।
Top Headline, अर्थ/सेयरशेयर बजारमा आज पनि पहिरो : २५ अङ्कले घट्दै एक हजार आठ सय ४८ दशमलव २८ विन्दुमा सिमित !
२४ घण्टामा ४९ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि
मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्गो लगाउने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय